Tanora 17 Taona Lasibatry ny Fanolanana Mitaky Rariny Nahazo Vahana ao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2014 22:12 GMT
Mpianatry ny kolejim-pitsaboana nasiolany ao Birgunj (Nepal) nandray anjara tamin'ny fiareta-tory fandrehetana labozia ho fanehoam-piraisankina amin'ny sakorokoroka fanoherana ny kapo-dahy [fanolanan'olona maro] any Birgunj, Nepalsy New Delhi, India. Sarin'i Manish Paudel. Fizakamanana Demotix (24/12/2012)
Niteraka resa-be tao amin'ny firenena be tendrombohitra ny taratasy misokatra iray nosoratan'ny niharam-boinan'ny kapo-dahy tao Nepal. Manjaka ao Nepal ny fanolanana sy ny karazan-kerisetra hafa mihatra amin'ny vehivavy ary mandositra ny maro amin'ireo nahavanon-doza.
Puja Bohara, mpianatra iray eo amin'ny famaranana ny taom-pianarany, niteny fa nomena zava-mahadomelina izy ary naolan'i Sagar Bhatta, tompon'ny fivarotam-boky iray, sy i Amar Awasthi, mpakasary iray, tamin'ny Marsa 2012 raha nitsidika ny fivarotan'i Bhatta ratovovavy hividy taratasy [gazety] vitsivitsy. Nodidiana higadra 13 an-tranomaizina ireo lehilahy roa ireo ary mandoa onitra Rs 50 000 (tokotokony ho 500 dolara amerikana) tsirairay avy tao amin'ny Lapan'ny fitsarana ao amin'ny distrikan'i Baitadi noho ny heloka bevava vitan'izy ireo. Saingy ny taona manaraka tamin'ny 28 Avrily 2014, nampitsimbadika ny didy navoaka ny Fitsarana Ambony tao Mahendranagar ka nanafaka azy ireo madiodio.
Tamin'ny 16 Desambra 2014, namoaka taratasy misokatra nampihetsi-po avy amin'i Puja hoan'ny Minisitry ny Lalànan'i Nepal, Narahari Acharya, ny gazety iray mivoaka isan'andro amin'ny teny Nepaley Kantipur, mangataka ny tokony hanasaziana ireo lehilahy nanolana azy:
Mialoha ny hamaranako ity taratasy ity, tiako ny manontany ny minisitry ny lalàna momba ireo efa nodidiana hisazy 13 taona any an-tranomaizina nefa dia noafahana indray hiverina ao amin'ny fiarahamonina. Tsy meloka ve izy ireo izay namotika ny fiainako? Manangana fanontaniana ara-pitondratena hoan'ny fiarahamonina izy ity noho ny heloka bevava, ary tsy matoky tsara ny fiarahamonina hoe iza no tsy manantsiny ary iza no meloka. Raha toa resy lahatra ianao fa nanao ny tsy mety aho ary ampy ny porofo dia afa-misamboatra ahy araka ny lalàna ianao. Raha tsy izany kosa dia tokony hiatrika ny vokatry ny lalàna ireo mpanolana ireo ary samborina indray — omeo rariny aho.
i Puja izay 17 taona dia avy amin'ny distrikan'i Baitadi, faritra andrefana indrindra ao Nepal mifanila amin'i Jhulaghat, India. Ny rain'i Puja, izay tantsaha, dia tsy manana toeram-pambolena ampy ho azy, ka niasa tamin'ny sahan'ny mpanakohariana iray izy hihazonana ny fianakaviany. Niady mafy i Puja mba ho tafiditra an-tsekoly, mandeha an-tongotra mihoatra ny adiny iray sy sasany handehanana any an-dakilany, ary iray amin'ny mpianatra mamiratra indrindra ao an-tsekoly, mihazona hatrany ny laharana voalohany isan-taona.
Lasa firesaka ao an-tanàna ny taratasy misokatra nalefan'i Puja tamin'ity herinandro ity rehefa latsa-panontaniana tamin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ambony ny olona ary nanome ny feony ho fanohanana an-drazazavavy.
Tao amin'ny antsafa iray nifanaovana tamin'ny fahitalavitra miteny Nepaley Himalaya tamin'ny fiandohan'ity volana ity, nanontany i Puja, “Ireo nanolana ahy, heverina ho tsy manantsiny ve izy ireo taorian'ny didim-pitsarana?”
Nandrisika ny minisitry ny lalàna ihany koa i Puja mba hanangana lalàna henjana kokoa hoan'ireo nomelohina ho mpanolana, ka tafiditra amin'izany ny famonoana ho faty. Ao amin'ny lalàna nepaley amin'izo fotoana izao dia tsy misy ny didy fanamelohana ho faty.
Tamin'ny 17 Desambra 2014, naneho ny heviny momba ity raharaha ity ny Minisitry ny Lalàna Narahari Acharya, nanome antoka ny hisian'ny rariny hoan'i Puja. Naneho hevitra ny politisiana malaza sady praiminisitra teo aloha ny Dr. Baburam Bhattarai, “Nampitomany ahy ny taratasin'i Puja.”
Menuka Thapa, filohan'i Raksha Nepal, ONG iray nanome fialofana an'i Puja, dia nidradradradra ihany koa hanome rariny hoan'i Puja.
Nampiasa ny Twitter ny olona hilaza ny fanohanany ihany koa:
Mampiseho ny rafi-pitsarantsika, ny filaminana ara-tsosialy sy ny fomba fitantanam-pitondrana ny taratasy maherin'i Pooja Bohara
Taratasy iray mampihetsi-po indrindra: tsy tokony hanana toerana ato amin'ny taonjato faha-21 ny fanolanana. Saingy mbola mitohy izany ato Nepal.
Fa mainona no mangina ny governemantantsika? Ilaina haingana ny rariny #JusticeForPuja
Fanentanana ara-pitsarana hoan'i Puja Bohara ao IAAS, tokotanin'ny oniversiten'i Paklihawa
Tsy manana anabavy aho fa mino fa hankarary ahy tokoa izy ity tahaka ny hoe anadahinao aho ry puja.
Firaisankina ho an'ny zon'ny vehivavy!!!
Taorian'ny namoahana ny taratasy misokatra, nihaniakatra ny fanindriana avy amin'ny fiarahamonina sivily, fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ary ny gazety atao amin'ny governemanta hihetsehany. Nanome antoka ny minisitry ny lalàna fa hahazo ny rariny i Puja. Ankehitriny dia manam-panantenana i Puja, farafaharatsiny hatramin'izao.